इतिहासमा पहिलो पटक यति धेरैले बढ्यो कुखुराको मासु ! केजीको कती पुग्यो ? - krishipost.com
इतिहासमा पहिलो पटक यति धेरैले बढ्यो कुखुराको मासु ! केजीको कती पुग्यो ?
पछिल्लो समय कुखुराको मासुको मूल्य दिन प्रतिदिन उकालो लाग्नेक्रम जारी छ। काठमाडौँ र चितवनमा कुखुराको मासुको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। राष्ट्रिय कुखुरा व्यवसायी सङघका अध्यक्ष जङगबहादुर बीसीका अनुसार शुक्रबार कुखुराको मासु प्रतिकेजी काठमाडौँमा ४३० रुपियाँ र चितवनमा चार सय रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ।
पछिल्लो एक महिनामा चल्लाको भाउ पनि गोटामा ३० देखि ३५ रुपैयाँले बढेको छ । प्रतिगोटा ५५ देखि ६० रुपैयाँमा कारोबार हुने चल्लाको भाउ ९० रुपैयाँभन्दा धेरै भएको नेपाल ह्याचरी उद्योग संघले जनाएको छ ।
प्यारेन्ट कुखुरा अभावमै चल्लाको उत्पादन साप्ताहिक रूपमा १५ लाख गोटाले कम भएको संघका अध्यक्ष टीकाराम पोख्रेल बताउँछन् । हप्तामा ४० देखि ४५ लाख चल्लाको माग भए पनि उत्पादन २५ लाख हाराहारी मात्रै रहेको उनको भनाइ छ ।
‘गत वर्ष यो सिजनमा ५५ लाख हाराहारी चल्ला रहे पनि अहिले धेरै कम भएको छ, अब तत्काल प्यारेन्ट आयात बढाउँदा पनि कम्तीमा ८ महिना त चल्ला उत्पादन बढाउनै लाग्छ’, अध्यक्ष पोख्रेल भन्छन् ।
नेपालमा चल्ला उत्पादन गर्ने माउ प्यारेन्ट कुखुरा थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स, जर्मनीलगायत मुलुकबाट आउने गरेकोमा लकडाउनका कारण प्रभावित बनेको पोख्रेलको दाबी छ । यसै हप्ता मात्रै दाना उत्पादक व्यवसायीले ब्रोइलर तथा लेयर्स दानाको भाउ पनि बढाएका थिए ।
दाना बनाउन आवश्यक पर्ने मकै भटमासको भाउ बढेको भन्दै उनीहरूले प्रतिकिलो २ रुपैयाँका दरले दानाको भाउ बढाएको नेपाल ह्याचरी संघले जनाएको छ । नयाँ मूल्य अनुसार ब्रोइलर कुखुराको दानाको भाउ प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ र लेयर्सको ५५ रुपैयाँ हाराहारी पुगेको संघका अध्यक्ष टीका पोख्रेलले बताए ।